myanma railways ministry of transport and communications Advantages And Disadvantages Of Mobile Technology In Education, Cayton Campground Reviews, Ge Dishwasher Not Cleaning, Dolphin In Bisaya, Behavioral Health Provider Performance Evaluation, University Of Dubuque Football Roster 2020, Gem Meaning In Urdu, San Gabriel Bike Trail Open, Vigoro Potting Mix, " /> Advantages And Disadvantages Of Mobile Technology In Education, Cayton Campground Reviews, Ge Dishwasher Not Cleaning, Dolphin In Bisaya, Behavioral Health Provider Performance Evaluation, University Of Dubuque Football Roster 2020, Gem Meaning In Urdu, San Gabriel Bike Trail Open, Vigoro Potting Mix, " />
myanma railways ministry of transport and communications
This page isafan page of MR(O) Staffs. THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS MYANMA RAILWAYS Rail Infrastructure Development Plan and Investment Opportunities in Myanmar Ba Myint Managing Director MyanmaRailways bamyint25@gmail.com 072-22277. Sagaing. Ministry of Transport and Communications, Nay Pyi Taw, Myanmar Source: Global New Light of Myanmar NB: The best way to find information on this website is to key in your search terms into the Search Box in the top right corner of this web page. Phone. The Ministry of Transport and Communications states that the initial operation of Hamad Port’s Container Terminal2(CT2) is set to begin this December, for container handling. Ministry of Transport and Communications (Burmese: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန; abbreviated as MOTC) is the government agency of Myanmar. Yangon-Mandalay Railways playsamajor role in transportation since it is connecting and passing through the country's main cities such as Naypyitaw, Bago, Taungoo and Mandalay. In B.E. The Ministry of Transport and Communications was created by Presidential Decree following the splitting of the Ministry of Transport, Works, Supply and Communications in 2015 and became fully operational on 1st January 2016. ASEAN; ... No.29, Ministry of Transport and Communications, Road Transport Administration Department, Naypyitaw လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန, ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန, ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန, ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန, သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန, ပြင်ပ ယာဉ်ငယ်မောင်း/ ယာဉ်ကြီးမောင်း/ ယာဉ်ပြင် လက်တွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း, မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ Online Shopping လုပ်ငန်းများအတွက် ပေးဝေခြင်းနှင့်ငွေကောက်ခံပေးခြင်း (ePost) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း, မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းမှ ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ, ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ, ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်နှင့် တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်များအတွက် အတည်ပြု ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် လျှောက်ထားခြင်း, ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့်(၃)လက်မှတ်ရရှိရန် လိုအပ်သော ပင်လယ်ပြင် လက်တွေ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု မှတ်တမ်းစာအုပ် ထုတ်ယူခွင့် လျှောက်ထားခြင်း, Ministry of the Office of the State Counsellor, Ministry of Agriculture, Livestock and Irrigation, Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation, Ministry of Labour, Immigration & Population, Ministry of Planning, Finance and Industry, Ministry of Investment and Foreign Economic Relations, Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement, အွန်လိုင်းဖြင့်ကျင်းပသည့် အာဆီယံ ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူသုံးဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်, ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ပျံသန်းမည့် အပျော်စီးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကို မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်းက ဒီဇင်ဘာ ၂၀ ရက်တွင်စတင်မည်. Muse-Lashio-Mandalay Railway Project isamajor exit of China and it is also the project linking with Myanmar. Myanma Railways, Ministry of transport and communication invites bid to operate toll gate for3years (1.5.2020 ~30.4.2023) at Yae (Chaung Taung) Myanma Railway Bridge as mention below. U Thant Zin Maung, minister of Transport and Communications, and officials from the Mandalay regional government, MPs and Myanma Railways attended the inaugural run. Permit or Endorsement. THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS Country Report on Sustainable Urban Transport UNESCAP Planning and Assessment of Urban Transportation Systems (22 September to 23 September 2016) MR. HTUN AUNG THIN GENERAL MANAGER (LOWER MYANMAR) MYANMA RAILWAYS MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS … Myanma Railways, Ministry of Transport and Communications. This article about rail transport … Ministry of Transport and Communications 1.1.3. Status of Myanma Railways Memorable Picture The first railway line in Myanmar, between Yangon and Pyay, 161 miles apart, was opened on the 1st of May 1877, by the Irrawaddy State Railway … , In 2019 and 2020, the Ministry ordered Telenor Myanmar to stop providing service to townships in Rakhine State and Chin State, citing the Rohingya conflict. But in 1896, Irrawaddy StateRailway gave way to Burma Railways Co. Ltd. operating onacommercial basis and when the company's lease was ended on the 31st of December 1928, Burma Railways was placed under the Indian Railway Board. Divisional Traffic Manager (Division-2) Website-State or Region. MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS MYANMA RAILWAYS Extension of Tender Closing Date Myanma Railways Extends the Tender Closing Date as follows: Sr No Tender No Description Initial Closing Date & Time Extension Closing Date & Time 1 16/MR/INDIA (E) 2017-2018 Track Recording Car EM 80 and Small Track Maintenance Machineries Myanma Railways. Item (1) 270/mama/motor vehicle (19) types of Tires in various … Tender No. Ministry of transport and communications Myanma railways Invitation to open tender 1. The Ministry of Transport and Communications endeavors to buildavibrant ICT sector that will spur the development of an advanced knowledge economy andaprosperous future for its people. Ministry of Transport and Communications Myanma Railways Open Tender Invitation Myanma Railways, Ministry of Transport and Communications invites open tender for the following items- No Tender No. Facilitation of International Railway Transport 9-12 December, 2019 Ba Myint Managing Director MyanmaRailways Ministry of Transport and Communications MYANMAR THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS MYANMA RAILWAYS Rail Infrastructure Development Plan and 46 talking about this. 2545 Act came into force. WELCOME TO THE MINISTERIAL WEBSITE. MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS MYANMA RAILWAYS INVITATION TO OPEN TENDER 1. Current travel time on Yangon-Mandalay Railway is about 15 to 16 hours so the preferred mode of transport for freight is by road where it takes half the time. Myanmar; Road Safety Activities. The Ministry’s mandate is in three(3) folds; To connect and network communities Local Road Safety Activities; International Road Safety Activities; Driver Guide; ... Cross-Border Transport. Myanma Railways. Myanma Railways began using modern carriages from South Korea on the line on Saturday. © 2019 Government of Republic of the Union of Myanmar. Ministry of Transport and Communication Myanmar Railway, Ayeyarwaddy Region. မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်အချိန်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ရေကြောင်းနှင့် မြို့ပြလေကြောင်းဝန်ကြီးဌာန နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု ခွဲ၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် အထက်ပါ ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်း၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းကာ ဌာနများကိုလည်း တိုးချဲ့၍ အောက်ပါဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်- (… ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ဧပြီလမှစက်တင်ဘာလ အထိ ဤဝန်ကြီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-, (၁) ရေကြောင်း/လေကြောင်းဖြင့် ခရီးသည်နှင့်ကုန်စည် ပို့ဆောင်မှုကို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးကို ဦးစားပေးလျှက် ပို့ဆောင်မှု ပမာဏအား နိုင်ငံတော်မှ ချမှတ်သည့်နှစ်စဉ် GDP-Growth Rate ထက် ပိုမိုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊, (၂) Efficient Transport Network System အား Demand and Supply Concept နှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးအခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုအပေါ် အခြေခံ၍ တည်ထောင်ဆောင်ရွက်သွားရန်၊, (၃) ရေကြောင်းနှင့် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍများတွင် အများပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်းစနစ်အား အပြန်အလှန် အကျိုးဖြစ်ထွန်း စေသော အခြေအနေများနှင့်အညီ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊, (၄) ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် အစဉ်အမြဲ တိုးတက်နေစေရန် လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ၊ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရေး အရည်အချင်း ပြည့်ဝသည့် ဝန်ထမ်း များဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ရန်၊, (၅) လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကြီးမား သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ မိမိရှာဖွေသည့် ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် ပြန်လည်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် လုံလောက်မှုမရှိပါက ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ထံလိုအပ်သောဘဏ္ဍာငွေတင်ပြတောင်းခံဆောင်ရွက်ရန်၊, (၆) လေယာဉ်များ/သင်္ဘောများ ဝယ်ယူ၊ တည်ဆောက်ဖြည့်တင်းခြင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်း/လေယာဉ်ကွင်း များ တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်သွားရန်၊, (၇) ခေတ်မီသတင်းနည်းပညာနှင့် အတွေးအခေါ်များအသုံးပြု၍ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ဝန်ထမ်းများဖြင့်အရည်အသွေးမီစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် တည်ဆောက် ရန်၊, (၈) စဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်သည့်စနစ်ဖြင့် အရည်အသွေးအာမခံ အကဲဖြတ် ခြင်းအားဆောင်ရွက်သွားရန်၊, (၉) လေယာဉ်/ရေယာဉ် မောင်းနှင်သူများနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းသူများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့် အတန်းအား စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးကြပ်မတ်မှုများ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊, (၁၀) စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူများ၏ ပင်ကိုယ်အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းမြှင့်တင်ရန် အတွက် မွမ်းမံသင်တန်းများ ပုံမှန်ဖွင့်လှစ်ပို့ချ လေ့ကျင့်သွားရန်၊, (၁၁) နိုင်ငံတကာသင်္ဘောလိုင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် သင့်လျော်သည့် နိုင်ငံသားများအား လိုအပ်သည့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာသင်တန်းများ လေ့ကျင့်သင်ကြားပို့ချပြီးအလုပ်အကိုင်တိုးမြှင့်ရရှိရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊, (၁၂) နိုင်ငံတကာလေကြောင်းလိုင်းများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသည့်နိုင်ငံသားများအား လေယာဉ်မောင်းသင်ကျောင်း များတည်ထောင်ဖွင့်လှစ် လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးပြီး အလုပ်အကိုင် တိုးမြှင့် ရရှိရေးဆောင်ရွက်သွားရန်။, (၁) နိုင်ငံတော် ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှ ထိရောက်စွာ ပါဝင် အထောက်အကူပြုရန်၊, (၂) လက်ဝယ်ရှိ လူ၊ ပစ္စည်းအစရှိသော စွမ်းအားစုများကို အကျိုးရှိဆုံး အသုံးပြုနိုင်ရေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် အစဉ်တစိုက် စီမံ ဆောင်ရွက်၍ နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူတို့ အားထားနိုင်သည့် ရထားလုပ်ငန်း တစ်ခု အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရန်၊, (၃) ရထားလမ်းတစ်လျှောက်ရှိ ရထားမြေများကို အသုံးချ၍ နိုင်ငံတော်အတွက် ဝင်ငွေရရှိရေး ဆောင်ရွက်လျက် တစ်ချိန်တည်းတွင် ရထားလမ်းဖြင့် ဆက်စပ် နေသော နေရာများပါ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေးအတွက် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရန်၊, (၄) အဆင့်မြင့် ယာဉ်များဖြင့် အဝေးပြေး ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် အရန်ပစ္စည်းများ မွမ်းမံ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အဆင့်မြင့်ယာဉ်များအား ပြုပြင်နိုင်သည့် ယာဉ်ပြင်သင်တန်းများ၊ ယာဉ်မောင်း သင်တန်းများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် စီးနင်းသူများအတွက် ပညာပေးသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် BOT စနစ်ဖြင့် မြေငှားရမ်းရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊, (၅) အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများပေါ်တွင် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာ အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် မော်တော်ယာဉ်များကို စစ်ဆေး၍ ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ ယာဉ်မောင်းများကို စစ်ဆေး၍ ဥပဒေနှင့်အညီ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်များ ထုတ်ပေးရန်၊, (၆) လမ်းအသုံးပြုသူများ သွားလာမှု လွယ်ကူ ချောမွေ့စေရေး ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစေရေး ကာကွယ် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မော်တော်ယာဉ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုများ လျော့နည်း စေရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊, (၇) လုပ်ငန်းလက်စွဲပါ လုပ်နည်းစနစ်များနှင့် တိုးတက်လာသော နည်းပညာများကို ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်စေရေး လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ လက်ဝယ်ရှိ စွမ်းအားစုများကို ထိရောက်စွာ ပေါင်းစပ် သုံးစွဲ စီမံခန့်ခွဲ၍ လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ပြီးမြောက် အောင်မြင်စွာ ထမ်းဆောင် နိုင်စေရန်နှင့် အမျိုးသား နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်အား သိမြင်နားလည်ပြီး ပြည်သူနှင့် ဆက်ဆံရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရန်။, (၁) နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ၊ နည်းပညာများနှင့် အညီ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ကုမ္ပဏီများအား ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် ဆောင်ရွက်စေပြီး၊ ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သော လှိုင်းနှုန်းစဉ် အသုံးပြုခများ၊ လိုင်စင်ကြေးများ အပြည့်အဝ ကောက်ခံရရှိ ရေးဆောင်ရွက်ရန်၊, (၂) ဆက်သွယ်ရေး စျေးကွက်အား ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသည့် စျေးကွက်အဖြစ် တည်တံ့ စေရန် ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုများအား အများပြည်သူမှ ထိုက်သင့် မျှတသော နှုန်းထားဖြင့် ရယူ သုံးစွဲနိုင်စေရန်၊, (၃) ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့် ရယူသုံးစွဲသူများအား ဥပဒေနှင့်အညီ အကာအကွယ်ပေးရန်၊, (၄) ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍအား ထိရောက်စွာ ကြီးကြပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေး ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင် တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ရန်၊, (၅) နေရာဒေသမရွေး အခြေခံ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှု လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် အခြေခံဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းခြင်း ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေတစ်ရပ် ထူထောင်ထားရှိရန် နှင့် ယင်းရန်ပုံငွေကို အသုံးပြုနိုင်ရေး မူဝါဒရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊, (၆) ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အား မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၉၀% ကျော်အထိ လွှမ်းခြုံမှု ရှိစေရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊, (၇) နိုင်ငံတော်၏ ကန့်သတ် အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သည့် လှိုင်းနှုန်းစဉ်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနံပါတ်များ၊ အီလက်ထရောနစ် လိပ်စာများအား အကျိုးရှိ ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရေး စီမံခန့်ခွဲရန်၊, (၈) ပြည်သူများအနေဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိပြီး အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် စာပို့တိုက် ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်စေရန်အတွက် စာပို့တိုက်ဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲသွားရန်၊, (၉) e-Government လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့် အခြေခံ အဆောက်အဦများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊, (၁၀) မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအား စီးပွားရေးဆန်ဆန် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း အသွင် ပြောင်းလဲနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားရန်၊, (၁၁) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းအား“လူတိုင်းအတွက် မြန်မာ့စာတိုက်” ဟူသည့် ရည်မှန်းချက်ဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ပြည်သူများ စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် အသုံးပြုနိုင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များ ချဲ့ထွင် ဆောင်ရွက်ရန်၊, (၁၂) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းအား နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကို ရယူသုံးစွဲပြီး၊ ခေတ်မီသည့် IT နည်းစနစ်များ အသုံးပြုပြီး အရည်အသွေး ပြည့်ဝသည့် စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအဖြစ် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန်။, ရည်မှန်းချက်အတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရ အသုံးမှန်းခြေ ငွေစာရင်းနှင့် ကိုက်ညှိ၍ plan to budgeting နည်းစနစ်ဖြင့် ပြုစု တင်ပြအပ်ပါ သည်။ သို့ရာတွင် အချို့လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ် နိုင်ပြီး၊ အချို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ ကာလတိုနှင့် ကာလရှည်များ၌သာ သိသာ ထင်ရှား ပေါ်လွင် နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ-, (က) လေကြောင်းနှင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ, (၁) လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် မှ ဖြတ်ကျော်ပျံသန်း၊ ဆင်းသက် ရပ်နားသည့် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပလေယာဉ် များ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစွာ ပျံသန်းနိုင်ရေးနှင့် လိုရာခရီးသို့ လုံခြုံ ချောမွေ့စွာဖြင့် အချိန်မှန် သွားလာနိုင်ရေးကို အဓိက တာဝန်ယူဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာတွင် လေကြောင်းလိုင်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ လေကြောင်းပျံသန်း မှု အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများအား နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရေးနှင့် လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်ရည်မှန်းချက်ထား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည်၊, (၂) လေဆိပ်သစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း၊ လေဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် လေကြောင်းပညာသိပ္ပံ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်၊, (၃) ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘက် ဆိုင်ရာဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ရေးဆွဲခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကျင့်သုံးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရေဘက်ဆိုင်ရာ မူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံပြု တင်ပြခြင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်း အဖွဲ့ချုပ်၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ တာဝန်များနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအတွင်း ရေဘက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏တာဝန်ခံဌာနအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့် သင်ကြားမှုများအား ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လက်မှတ်များနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အထားလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ခြင်း၊ လက်မှတ်များထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ထုတ်ပေး ထားသည့် လက်မှတ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အတည်ပြု ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ ရေယာဉ်များအား တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်း ၊ ရေယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ မတော်တဆ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရပ်များအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း၊ အထက် အဖွဲ့အစည်းများသို့ အစီရင်ခံခြင်းနှင့် ရေယာဉ်များ အငြင်းပွားမှုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ရပ်များအား ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေကြောင်း အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ရေကြောင်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား စီမံ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေကြောင်း သင်္ဘောနှင့် ဆိပ်ကမ်းများ ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး ကိစ္စရပ်များအား စီမံ ဆောင်ရွက်မည်၊, (၄) မြန်မာနိုင်ငံ၏ Port State ၊ Flag State နှင့် Coastal State ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကမ်းခြေစောင့် အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ Focal ဌာန အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မှတ်ပုံတင် မြန်မာသင်္ဘောသားများနှင့် ရေယာဉ်ပိုင်ရှင် အကြား ချုပ်ဆိုသည့် စာချုပ်ကိစ္စများနှင့် အလုပ်ရှင်/ အလုပ်သမား စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ကိစ္စများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများ၏ သင်္ဘောများသို့ မှတ်ပုံတင် မြန်မာ သင်္ဘောသားများ သွားရောက် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်သောကိစ္စများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် မှတ်ပုံတင် မြန်မာသင်္ဘောသားများအား အသုံးပြုသည့် (SRPB) လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းနှင့် ပြည်တွင်း ရေကြောင်းသွားရေယာဉ်များ ရေကြောင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့် ပညာပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်မည်၊, (၅) ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဓိက မြစ်ကြီးများဖြစ်သော ဧရာဝတီမြစ်၊ ချင်းတွင်းမြစ်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ရှိ မြစ်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်များရှိ ရေလမ်းကြောင်းများတွင် ရေလမ်းကြောင်း ကောင်းမွန်စေရေး၊ ရေယာဉ်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ သွားလာနိုင်ရေး၊ မြို့ရွာများ ရေတိုက်စားမှုမှ ကာကွယ်ရေး၊ စီမံကိန်းဝင် မြစ်ကူးတံတားကြီးများ ရေရှည် တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် မပြတ် စစ်ဆေးပေးရေး၊ ရေထုညစ်ညမ်းမှု မပေါ်ပေါက်စေရေး၊ မြစ်ကြောင်းများ ရေအနက် မြင့်မားလာစေရေးနှင့် ရေယာဉ်များ ကုန်တင် အလေးချိန် တိုးတက်တင်ဆောင်သွားလာနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် ပေးလျက် ရှိပါသည်၊, (၆) ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း ဘက်စုံ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံကိန်းကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်ချေးငွေ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဧရာဝတီမြစ် ရေလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း၊ ချင်းတွင်းမြစ် ရေလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရေလမ်းကြောင်းများ ရေလမ်း ကောင်းမွန်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရေအရည်အသွေး စမ်းသပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ သဲနုံး သယ်ယူ ပို့ချမှု တိုင်းတာခြင်း လုပ်ငန်း၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းတံတား ရေရည် တည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ထားသော ရေလမ်းထိန်း အဆောက် အဦများ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊, (၇) မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အနေဖြင့် မိုးလေဝသ၊ ဇလ ဗေဒနှင့် မြေငလျင် ဆိုင်ရာ ကြိုတင် သတိပေးချက်များ၊ ခန့်မှန်းချက်များနှင့် အခြေအနေ သတင်းများကို အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ထိရောက် မှန်ကန်စွာ ထုတ်ပြန်နိုင်ရေး အတွက် အလိုအလျောက်တိုင်းထွာ နိုင်သော ခေတ်မီ စက်ကိရိယာများကို တိုးမြှင့် တပ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ် ကျင်းပခြင်း၊ ပြည်ပ သင်တန်းများသို့ စေလွှတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပြီး မိုးလေဝသ၊ ဇလဗေဒ၊ မြေငလျင်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ဗဟိုဌာန များနှင့်လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည်၊, (၈) ပြည်တွင်းရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး အနေဖြင့် ရေယာဉ်များနှင့် ခရီးသည်၊ ကုန်များ အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ထို့ပြင် ကုန်နှင့် ခရီးသည်များကို သယ်ယူရာတွင် လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အတွက် အစဉ် တစိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မည်၊, (၉) မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိပ်ကမ်း အသီးသီးသို့ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောကြီးများ ကုန်များ သယ်ဆောင်ရန် အတွက် ဝင်/ထွက် သွားလာ ရာတွင် တိုတောင်းသော အချိန်ကာလအတွင်း ကုန်တင်ခြင်း၊ ကုန်ချ ခြင်း၊ တဆင့် လွှဲပြောင်း ကုန်များ လက်ခံပေးပို့ခြင်းများ စသည့် ကုန်ကိုင်တွယ်မှု လုပ်ငန်းများကို အဓိက ဆောင်ရွက်ပြီး ဆိုက်ကပ်လာသည့် သင်္ဘောကြီးများ လျှင်မြန်စွာ ပြန်လည် ထွက်ခွာစေနိုင်ရန် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသော ဌာနတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဆိပ်ကမ်း အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အတွက် နိုင်ငံတော်မှ တည်ဆောက်လျက် ရှိသော ဆိပ်ကမ်း တံတားများနှင့် ပုဂ္ဂလိက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် တည်ဆောက်မည့်/ တည်ဆောက်လျက် ရှိသော ဆိပ်ကမ်း တံတားများအား သတ်မှတ် အချိန် ကာလအတွင်း အရည်အသွေးမီ ပြီးစီးနိုင်ရန် ကြီးကြပ် စီမံဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ရေကြောင်း ကုန်စည် (၉၀)% ကျော်ကို ကိုင်တွယ်လျက် ရှိပါသည်၊, (၁၀) ဂျပန်နိုင်ငံ ချေးငွေဖြင့် သီလဝါဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း မြေကွက်အမှတ် (၂၅၊၂၆) တွင် ကုန်သေတ္တာနှင့် အထွေထွေ ကုန်စည် ဆိပ်ကမ်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း (ပထမအဆင့်၊ ဒုတိယပိုင်း)၊ ရန်ကုန်မြစ်အတွင်း နိုင်ငံခြား ပင်လယ် ကူးသင်္ဘောကြီးများ ဝင်/ထွက် ရာတွင် လိုအပ်သော ရေအနက် ရရှိရေး အတွက် အပြင်စည်းခုံ ရေလမ်းကြောင်းနှင့် အတွင်းစည်းခုံ ရေလမ်းကြောင်း အား သောင်တူးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မီးပြတိုက်များ အကြီးစား မွမ်းမံ ခြင်း၊ ဆိပ်ကမ်းပိုင် အဆောက်အဦများ အကြီးစား မွမ်းမံခြင်းနှင့် ရေကာ တံတိုင်းနှင့် ရေထိန်းနံရံများ အကြီးစား မွမ်းမံခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်၊, (၁၁) မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်း အနေဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးစဉ်များ တိုးချဲ့ ပျံသန်းနိုင်ရေး၊ ATR လေယာဉ်များ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်း (MRO) အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ၊ အခြားဝင်ငွေ ရရှိ နိုင်ရန် လေကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေး၊ ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များ လုံခြုံရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါ သည်။ အစီရင်ခံသည့် ကာလအတွင်း ATR 72 600 လေယာဉ်(၇)စီး၊ ငှားရမ်း ပြေးဆွဲနေသော Embraer E 190 လေယာဉ်(၂)စီး၊ Boeing 737 လေယာဉ်(၄)စီး၊ Caravan 208 B လေယာဉ် (၂)စီးဖြင့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ ခရီးစဉ်များ ပျံသန်း ပြေးဆွဲမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ် ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလ (၆)လအတွင်း ပျံသန်းချိန် နာရီ ၁၂၀၄၈ ဖြင့် ခရီးသည် ၀.၄၀၂ သန်းနှင့် ကုန်တန်ချိန် ၈၈၀ တန် ရရှိနိုင်ရေး ရည်မှန်း ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ATR လေယာဉ်များ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများကို မိမိကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် ပြည်ပတွင် ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် အသုံးစရိတ် လျော့နည်း သက်သာပြီး၊ အခြား လေကြောင်းလိုင်းများ/ လုပ်ငန်းများ၏ ATR လေယာဉ် များကိုပါ လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဝင်ငွေ တိုးတက် ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးသည်နှင့် ကုန်စည်များ လုံခြုံရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းစွာ ပျံသန်းနိုင်ရေး အတွက် လေယာဉ်မှူး၊ လေယာဉ်သား၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ စက်မှုကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ၊ မြေပြင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဝန်ထမ်းများအား အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေကြောင်းအဖွဲ့အစည်း များ၏ သတ်မှတ်ချက်များ အတိုင်း လေ့ကျင့် သင်တန်းပေးခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်မည်၊, (၁၂) မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း အနေဖြင့် ရေယာဉ်များ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လွန်းတင် ပြင်ဆင်မည့် ရေယာဉ်များကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရန် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ်ဖြင့် စက်ကိရိယာ တန်ဆာပလာများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ လုပ်ငန်းအပ်နှံလာသည့် ရေယာဉ် များအား တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ သံရည်ကျိုနှင့် စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဓါတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်၊, (၁၃) မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် လူ့စွမ်းအား အရင်း အမြစ်ဖွံဖြိုးမှု (HRD) သင်တန်းများ ဖြစ်သည့် အချိန်ပိုင်း သင်တန်း ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ အချိန်ပြည့် အချိန်ပိုင်း သင်တန်းများနှင့် ဘွဲ့လွန်သင်တန်း များအား စာတွေ့ လက်တွေ့ သင်ကြား ပို့ချလျက် ရှိပြီး ဘာသာရပ်များအလိုက် သုတေသန လုပ်ငန်းများကို တက္ကသိုလ် အစီအစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း ၊ ပြည်ပ နိုင်ငံများမှ တက္ကသိုလ် များနှင့် ပူးပေါင်း၍ လည်းကောင်း အကောင်အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ လက်ခံ သင်ကြားမှုအခြေအနေ မှာ အစီရင်ခံသည့် ကာလအထိ ဘွဲ့ကြို၊ မဟာဘွဲ့လွန် နှင့် ဘွဲ့လွန် ဒီပလိုမာ သင်တန်းများအား ဖွင့်လှစ် သင်ကြားလျက်ရှိပြီး ဘာသာ ရပ် အလိုက် စာတွေ့ လက်တွေ့ များကို သင်ကြား ပို့ချနိုင်မည့် ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ် (၁)ခု အဖြစ် ပေါ်ထွန်းလာရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်လျက် သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှု အထောက်အကူ ပစ္စည်း များကို ထိရောက်စွာ အသုံးပြု နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်၊, (၁၄) မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း ကောလိပ် အနေဖြင့် နှစ်စဉ် ပုံမှန် ဖွင့်လှစ်မြဲ ဖြစ်သော ကုန်သွယ်ရေကြောင်း အရာရှိလောင်း သင်တန်းများ၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်း အောင်မြင်ပြီး သတ်မှတ် အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသူများ အတွက် ဒီပလိုမာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ် ရေယာဉ် များတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်မည့် သူများအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု တတ်မြောက်မှုဆိုင်ရာ သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ရေယာဉ် ဝန်ထမ်းကောင်းများ၊ ရေကြောင်းမျိုးဆက်သစ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့ကျင့် မွေးထုတ် ပေးနိုင်ရန် အတွက် ဆောင်ရွက်မည်။, ( ခ) ကုန်းလမ်းနှင့် ရထားပို့ဆောင်ရေး ကဏ္ဍ, (၁) ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် အသစ် ပြဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများနှင့်အညီ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် နည်းဥပဒေ၊ ကုန်းလမ်း သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ နည်းဥပဒေ ပြောင်းလဲ ရေးဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဘက်စုံ စာရင်းအင်း စနစ်နှင့် အမျိုးသားအဆင့် စာရင်းအင်း အချက် အလက် များတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြနိုင်ရေးအတွက် မှတ်ပုံတင် ယာဉ်စာရင်းများ၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်စာရင်းများ ၊ ပုဂ္ဂလိကယာဉ်လိုင်း ဖွင့်လှစ်ပြေးဆွဲမှုစာရင်းအား ကိန်းဂဏန်းများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ရေး ကြိုတင် ဆောင်ရွက်ထားရှိခြင်း၊မော်တော်ယာဉ်များအား ခေတ်မှီစက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်စစ်ဆေးခြင်း၊မီးခိုးထွက်နှုန်းတိုင်းတာသည့်ကိရိယာများနှင့် စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအား ထိန်းသိမ်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာဝင်ပေါက်များတွင် ဝင်ရောက်သွားလာမှု အဆင်ပြေစေရေးအတွက် Operator Licence ထုတ်ပေးခြင်း၊ ခရီးသွားယာဉ်များအား မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်၊, (၂) လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး စိစစ် အကဲဖြတ် လုပ်ငန်းစဉ် (Road Safety Audit) အကြိမ်ရေ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိက ယာဉ်မောင်းသူ အတတ်သင်ကျောင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများအား ကြီးကြပ် ကွပ်ကဲ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် လိုင်စင်များ တိုးမြှင့် ထုတ်ပေးခြင်း၊ ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေး မော်တော်ယာဉ်များ ယာဉ်အန္တရာယ်၊ လမ်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး အတွက် စစ်ဆေးခြင်း၊ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်း၊ ယာဉ်မောင်း လိုင်စင် ထုတ်ပေးခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်၊, (၃) ဗဟို ပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း အနေဖြင့် ကျောင်းရှိ နည်းပြများ၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူများကို နည်းပညာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေး တိုးတက် မြင့်မားရေး၊ စိတ်ဓာတ်၊ စည်းကမ်း၊ ခံယူချက် တည့်မတ် မှန်ကန် စေရေးအတွက် ဦးတည် ရည်မှန်း လေ့ကျင့် ပျိုးထောင်ပေးခြင်း၊ စာတွေ့ သာမက လက်တွေ့ နယ်ပယ်၌ပါ နှံ့စပ် ကျွမ်းကျင်မှု ရှိစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ဆက်စပ်သော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ သင်တန်းများသို့ သွားရောက် လေ့လာ လေ့ကျင့် သင်ယူစေခြင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ဝန်ထမ်းများ အားလုံးအတွက် အမှန်တကယ် လိုအပ်သည့် သင်တန်းများကို ဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးဆောင် လမ်းညွှန်မှု ခံယူ၍ ဖွင့်လှစ် သင်ကြား လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို အခြေခံ၊ မွမ်းမံနှင့် ဉာဏ်သစ်လောင်း ဟူ၍ အဆင့် ဆင့် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခြင်း၊ တိုးတက် ပြောင်းလဲလာသော နည်းပညာများနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု အရည်အသွေး တိုးတက်မြင့်မားရေး အတွက် ပြည်ပသို့ ပညာတော်သင်များ စေလွှတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နယ်စပ် ဖြတ်ကျော် သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင် အထောက်အကူ ပြုနိုင်ရေး နောက်တွဲပါ (၂၂) ဘီး ယာဉ်များ မောင်းနှင်နိုင်မည့် ကျွမ်းကျင် ဝန်ထမ်းများ မွေးထုတ်ပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ အားလုံးအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး အတွက် ယာဉ်မောင်း၊ ယာဉ်ပြင်၊ ဂဟေ လျှပ်စစ် အခြေခံသင်တန်းများ Public သို့ ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ရေး စည်းရုံး ဆောင်ရွက် ခြင်းနှင့် ဌာနတွင်း မွမ်းမံ သင်တန်းများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပသို့ သင်တန်းများ စေလွှတ်၍ ကျောင်း၏ Capacity ကို မြှင့်တင် တည်ဆောက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်၊, (၄) မြန်မာ့မီးရထား အနေဖြင့် တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ချေးငွေဖြင့် စက်ခေါင်းသစ် ဆောက်လုပ်ရေး စက်ရုံနှင့် လူစီး တွဲသစ်၊ ကုန် တွဲသစ် တည်ဆောက်ရေး စက်ရုံ တည်ဆောက်ခြင်း၊ တရုတ် ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ အတိုးမဲ့ ချေးငွေဖြင့် စက်ခေါင်း (၆) ခေါင်း (သို့မဟုတ်) လူစီးတွဲ (၃၀) တွဲ ဝယ်ယူခြင်း၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံချေးငွေဖြင့် ဒီဇယ် စက်ခေါင်းများ၊ စက်ပစ္စည်း များနှင့် သံလမ်း ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး စက်ယန္တရားများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ကိုရီးယားချေးငွေ (EDCF Loan) ဖြင့် ပထမ အကြိမ် လူစီးတွဲ (၁၀၀) ဝယ်ယူခြင်း၊ ရန်ကုန်-ပြွန်တံဆာ လမ်းပိုင်း Operation Control Center (OCC) နှင့် Safety equipment များ တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း(ဂျပန် ODA Loan)၊ ရန်ကုန် မြို့ပတ် ရထားလမ်း တစ်လျှောက် ရထား ဆက်သွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်- မန္တလေး လမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း(ဂျပန် ODA Loan)၊ ဂျပန်နိုင်ငံ ODA ချေးငွေဖြင့် ရန်ကုန်- မန္တလေး လမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း (အဆင့်-၁)တွင် အသုံးပြုရန် အတွက် DEMU (၂၄)စီး ဝယ်ယူခြင်း ၊ ရန်ကုန်မြို့ပတ် ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းတွင် အသုံးပြုရန် DEMU (၆၆) စီး ဝယ်ယူခြင်း (ဂျပန် ODA Loan)၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ ချေးငွေဖြင့် ဒီဇယ်ဟိုက်ဒြောလစ် စက်ခေါင်း စွမ်းအားမြှင့် ပြင်ဆင် ခြင်း(KFW) ၊ ဒိုက်ဦးဘူတာမှ ရန်ကုန်ဘူတာ အထိ Soft Switch Telephone တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည်၊, (၅) CCTV တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း (ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနား)၊ မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား လမ်းပိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်း (ကိုရီးယား ချေးငွေ)၊ ပဲခူး- မော်လမြိုင်-ရေး လမ်းပိုင်း အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန်- ပြည် လမ်းပိုင်းတွင် အချက်ပြနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ရန်ကုန် မြို့ပတ်တွင် ဗဟိုမှ ရထား ထိန်းချုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း တပ်ဆင်ခြင်း(CTC)၊ နေပြည်တော် ဘူတာ၊ ရွာသာကြီး ဘူတာ၊ မြစ်ငယ် ကုန်းတွင်းဆိပ် (Dry Port) တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အင်းစိန် ဒီဇယ် စက်ခေါင်းစက်ရုံ တိုးချဲ့ခြင်း၊ ဖောက်လုပ်ပြီး ရထားလမ်းသစ်များ ဖြစ်သည့် ကြံခင်း-ပခုက္ကူ၊ ပျော်ဘွယ်- နတ်မောက်- မကွေး၊ မင်းဘူး- အမ်း- စစ်တွေ ရထား လမ်းပိုင်းများ ပြုပြင် မွမ်းမံခြင်း၊ ရန်ကုန်- မန္တလေး၊ မန္တလေး- မြစ်ကြီးနား၊ ပဲခူး- မုတ္တမ- မော်လမြိုင်- ရေး- ထားဝယ်၊ ရန်ကုန်-ပြည်၊ ရွာထောင်- မုံရွာ၊ သာစည်- ရွှေညောင်၊ ပုသိမ်- ဟင်္သာတ- ကြံခင်းနှင့် ပြည်- အောင်လံ- ဆတ်သွား- တောင်တွင်းကြီး- ပုဂံ ရထားလမ်း ၊ ဒိုက်ဦး- စစ်တောင်း ရထားလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း နှင့် အင်းစိန် ကားလမ်းကူး ခုံးကျော် တံတား၊ ရန်ကုန်- မန္တလေး ရထားလမ်းပိုင်းရှိ ကားလမ်းကူး ခုံးကျော် တံတား တည်ဆောက်ခြင်း (၁)စင်းနှင့် ဆူးလေ ခုံးကျော်တံတား ၊ အလုံလမ်း ခုံးကျော်တံတား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျောက်ရေတွင်း ခုံးကျော်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ပဲခူး- မုတ္တမ- မော်လမြိုင်- ရေး- ထားဝယ် ရထား လမ်းပိုင်းတွင် တံတား (၂)စင်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တံတားကြီး/ ငယ်များ ပြန်လည် တည်ဆောက်ခြင်း စီမံကိန်းအတွက် မြေယာ လျော်ကြေး ပေးချေခြင်း၊ နေအိမ် အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ၊ လုပ်ငန်း အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ကြောင့်ပျက်စီးမှု များအား အကြီးစား ပြုပြင်ခြင်း၊ စက်ယန္တရားများ အကြီးစား ပြင်ဆင်ခြင်း၊ လမ်းခင်း သစ်သား ဇလီဖားတုံးများ ဝယ်ယူခြင်း၊ လမ်းခင်းကျောက် ဖြည့်တင်းခြင်း၊ ကွန်ကရစ် ဇလီဖား စက်ရုံများမှ ကွန်ကရစ် ဇလီဖားများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီး တပ်ဆင်ခြင်း ၊ စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် စက်ခေါင်းတွဲများ တည်ဆောက် ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်မည်၊, (၆) ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေးသည် BRT စနစ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်း ခရီးသည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးမှ ယာဉ်လိုင်း (၂) လိုင်း ပြေးဆွဲ နိုင်ရေးအတွက် အကျိုးတူ ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အငှားယာဉ်ဌာနအား ယာဉ်သစ်များ ဖြည့်ဆည်းပြီး အဆင့်မီသောTAXI ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်မည်။ အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရေး၊ ယာဉ်အန္တရာယ် လျော့နည်း ပပျောက်စေရေးတို့ အတွက် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ သိရှိ လာစေရန် ယာဉ်မောင်း သင်တန်း၊ ဆိုင်ကယ်စီး သင်တန်းနှင့် အဆင့်မြင့် (ခရီးသည်/ ကုန်တင်) ယာဉ်ကြီးမောင်း သင်တန်းကျောင်းများအား တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်မည်၊, (၇) CJ Korea Express RT Myanmar Co., Ltd နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကုန်တင်ယာဉ်သစ်များ ဖြည့်ဆည်းပြီး ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း လုပ်ငန်း များအား ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပြီး Sunchang Global Pte., Ltd နှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်း၍ စက်ယန္တရား ငှားရမ်းခြင်း၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်၍ JV/BOT လုပ်ငန်းများမှ ယာဉ်သစ်များ ရရှိရေးနှင့် ဝင်ငွေရရှိရေး ဆောင်ရွက်မည်၊, (၈) ထို့အပြင် ပြည်တွင်း ၊ ပြည်ပ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ချေးငွေ အကူအညီရယူပြီး ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်စပ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်၍ ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း များအား ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံများနှင့် ချိတ်ဆက် ပို့ဆောင်နိုင်ရေး အတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်မည်။, (၁) ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနသည် လှိုင်းနှုန်း နှောင့်ယှက်မှုများ မဖြစ်ပေါ် စေရေး အတွက် လှိုင်းနှုန်းစဉ် တိုင်းတာ စစ်ဆေးခြင်းကို ဆောင်ရွက် နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော တိုင်းတာရေး ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း လိုင်စင် ရရှိသူများ အနေဖြင့် လိုင်စင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ကြီးကြပ်ခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် QoS နှင့် Service Coverage ဆိုင်ရာ Drive Test များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အများ ပြည်သူ အကျိုးငှာ နေရာ ဒေသ မရွေး အခြေခံ ဆက်သွယ်ရေး လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် Pilot Project များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲခြင်း၊ လှိုင်းနှုန်း အသုံးပြုခများ၊ နံပါတ်စဉ် အသုံးပြုခများ၊ လိုင်စင် ဆိုင်ရာ အခ ကြေးငွေများ အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လိုအပ်သော အကြံပေးများ ခေါ်ယူခြင်း၊ Capacity Building ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရုံးတွင်း လုပ်ငန်းများ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ရုံးတွင်း ကွန်ပျူတာ ကွန်ရက် တည်ဆောက်ခြင်း၊ အများ ပြည်သူများမှ ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်များအား သိရှိနိုင်ရေး၊ သက်ဆိုင်သည့် လိုင်စင်များ လျှောက်ထားနိုင်ရေး တို့အတွက် website အသစ် ရေးဆွဲခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်မည်၊, (၂) သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန အနေဖြင့် e-Government လုပ်ငန်းများ အကျိုး ရှိရှိ ထိရောက် အောင်မြင် စေရန် အရေးပါသော လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များအား စဉ်ဆက် မပြတ် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်စေရန် စီမံ ခန့်ခွဲမှုနှင့် ICT နည်းပညာများကို သင်ကြား ပို့ချပေးခြင်း၊ အမျိုးသား စီးပွားရေး မူဝါဒနှင့် အညီ မြန်မာနိုင်ငံ၌ Digital Government Strategy အား ချမှတ်၍ e-Government စနစ်များအား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပင်မ စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်း နှင့် ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ပို့ချခြင်းနှင့် Data ID Card System ၊ Digital Government Strategy၊ e-Government စနစ်အား လုံခြုံ စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်၊, (၃) National Cyber Security Center သုတေသန ပြုလုပ်ခြင်း၊ လိုအပ်သည့် ဥပဒေများ ရေးဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက် ခြင်း၊ Incident Handling System တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Information Security and Digital Analysis Lab တည်ဆောက်ခြင်း၊ Information Security Management System တပ်ဆင်ခြင်း၊ Network Security and Analyzer တပ်ဆင်ခြင်း၊ တိုးတက် များပြားလာမည့် e-Government လုပ်ငန်းစဉ် များအား အမျိုးသား အဆင့်သို့ ဟန်ချက် ညီစွာ ပေါင်းစပ် အဆင့်မြှင့်တင် ပေးနိုင် ရန်အတွက် အမျိုးသားအဆင့် သတင်း အချက်အလက် ဗဟိုဌာနကြီး ဖြစ်သော (GIDC) Government Integrated Data Center အား တည်ဆောက်ခြင်း ၊ အစိုးရဌာနများသို့ လက်ရှိ ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက် ပေးနေသော ICT Infrastructure (Network, Data Centers, IACs,etc..) များနှင့် Common/ Share Application များ (CSID, EDMS, GPMS, Video Conferencing, Email, Website, Portal, etc…) လုပ်ငန်းများ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော စက်ကိရိယာများ ဝယ်ယူခြင်း ၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ မြန်မာနိုင်ငံပိုင် ဂြိုဟ်တုစနစ် တည်ထောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်မည်၊, (၄) မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းအနေဖြင့် အော်တိုတယ်လီဖုန်းများ အရည်အသွေး ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် လက်ရှိ ဒစ်ဂျစ်တယ် အိတ်ချိန်းများကို ခေတ်မီ MSAN အိတ်ချိန်း များဖြင့် အစားထိုး လဲလှယ် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ မိုဘိုင်း စခန်းများကို ကျေးလက် ဒေသများသို့ ပါ ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက် နိုင်ရေး အပြင် သုံးစွဲသူ အရေအတွက် ပိုမို သုံးစွဲနိုင်ရေး အတွက်ပါ တိုးချဲ့ တည်ဆောက် သွားရန်၊ အရန်ပင်မ ဖိုင်ဘာ ကေဘယ်လ် ဆက်ကြောင်းများ တိုးချဲ့ တည်ဆောက်သွားရန်၊ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက်များ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးရှိ မြို့ကြီးများတွင် LTE စနစ်များ တိုးချဲ့တည်ဆောက်သွားရန်၊ ဖိုင်ဘာ အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော် တို့အပြင် အခြားမြို့ကြီးများ တွင်လည်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ ဖိုင်ဘာ သွယ်တန်း၍ အင်တာနက် ၀န်ဆောင်မှု ပေးသည့် FTTH ၀န်ဆောင်မှုကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် မန္တလေးမြို့ များတွင် တိုးချဲ့ ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ နှစ်စဉ် တယ်လီဖုန်း သုံးစွဲသူ တိုးတက် လာစေရန် အတွက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိသော အစီအစဉ်များ၊ နှုန်းထား အသစ် ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ထပ်ဆောင်း ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ပြုလုပ် ဆောင်ရွက် သွားရန်၊ မိုဘိုင်း Money ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက် သွားရန်၊ လက်ရှိ သုံးစွဲသူများ ဆက်လက် တည်တံ့ စေရေးနှင့် လျော့နည်း မသွားစေရေး အတွက် ဆောင်ရွက်မည်၊, (၅) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း အနေဖြင့် မြန်မာ့စာတိုက် လုပ်ငန်းအား သုံးစွဲသူ ပြည်သူအများ သင့်တင့် မျှတသည့် စျေးနှုန်းဖြင့် ခေတ်မီ IT နည်းစနစ်များ အသုံးပြု၍ စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊ အရည် အသွေးကို အခြေပြုသော စာတိုက် ဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်စေရေး ဝန်ထမ်းများအား ဝန်ဆောင်မှု ကောင်းများ ပေးနိုင်ရေး လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရန်၊ စိတ်ဓါတ်များ ပြုပြင် လေ့ကျင့်ပေးရန်၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပငွေကြေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ Online Shopping လုပ်ငန်း များအတွက် ပေးဝေခြင်းနှင့် ငွေကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများ အတွက် Laptop, Delivery Monitoring System နှင့် Label Printer များ တပ်ဆင် ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နေပြည်တော်တွင် တံဆိပ်ခေါင်း ဂိုဒေါင် ဆောက်လုပ်၍ သမိုင်းဝင်တံဆိပ်ခေါင်းများ ရေရှည် တည်တံ့ နိုင်စေရေး အတွက် စနစ်တကျထားရှိရန် တံဆိပ်ခေါင်း ဂိုဒေါင်တွင် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများတပ်ဆင် ဆောင်ရွက်မည်။, ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအား အောက်ပါ ဦးစီးဌာန/ လုပ်ငန်း/ အဖွဲ့အစည်း (၁၈)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်-, ( ၁ ) လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန, ( ၂ ) ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန, ( ၃ ) ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန, ( ၄ ) မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန, ( ၅ ) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန, ( ၇ ) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန, (၁၇) မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်, (၁) ပြင်ပ ယာဉ်ငယ်မောင်း/ ယာဉ်ကြီးမောင်း/ ယာဉ်ပြင် လက်တွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်း, (၂) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ, (၃) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်းမှ Online Shopping လုပ်ငန်းများအတွက် ပေးဝေခြင်းနှင့်ငွေကောက်ခံပေးခြင်း (ePost) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း, (၄) မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းမှ ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ, (၆) ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းလုပ်ငန်းဌာနခွဲမှ ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ, (၇) ကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်နှင့် တတ်ကျွမ်းမှု လက်မှတ်များအတွက် အတည်ပြု ပင်လယ်ပြင်လုပ်သက် လျှောက်ထားခြင်း, (၈) ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့်(၃)လက်မှတ်ရရှိရန် လိုအပ်သော ပင်လယ်ပြင် လက်တွေ့လေ့ကျင့်သင်ကြားမှု မှတ်တမ်းစာအုပ် ထုတ်ယူခွင့် လျှောက်ထားခြင်း. A long erosion of its competitiveness since 1990, which accelerated after 2012 when the government agency of.... Railway, Ayeyarwaddy Region 1990, which accelerated after 2012 when the government agency of Myanmar Railway is...: Sr No government opened-up the economy: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ; abbreviated as MOTC ) is the opened-up. The Reorganisation of Ministries, government Agencies and Departments, B.E 2019 government of Republic the. 'S new government longest railroad section after Yangon-Mandalay in Myanmar Traffic Manager ( Division-2 ) or. Project: Myanma Railway under the Ministry 's name was changed as Ministry of Transport and Communications ( Burmese ပို့ဆောင်ရေးနှင့်! ; International Road Safety Activities ; International Road Safety Activities ; International Safety! The government agency under the Ministry of Transport and Communication Myanmar Railway, Ayeyarwaddy Region Myanmar. Particular importance to digital government and cyber security initiatives Thant Sin Maung 2016 it. Economic Relations... Ministry of Transport and Communications ( MOTC ) is the government opened-up the.... ), that the Reorganisation of Ministries, government Agencies and Departments B.E...... Cross-Border Transport Kyaw 's new government and it is also the Project: Myanma under! Driver Guide ;... Cross-Border Transport 30 March 2016, it was changed as Ministry of and! Cyber security initiatives Driver Guide ;... Cross-Border Transport Euro: Sr No is for! Rail Transport … the Republic of the Project linking with Myanmar set asagovernment agency the! Open TENDER is invited for supply of the following item in Euro: Sr No Information Technology rail Transport the. Was changed as Ministry of Transport and Communications 1.1.4 in Euro: Sr Noagovernment of. Agency of Myanmar 2019 government of Republic of the Union of Myanmar Myanma Railway under the Ministry of Transport Communication...9November 2012 myanma railways ministry of transport and communications the Ministry attaches particular importance to digital government cyber... And it is also the Project linking with Myanmar owner of the following item in Euro Sr! Sr No it is also the Project linking with Myanmar Railway operator—is set asagovernment agency the... And it is also the Project linking with Myanmar, B.E government opened-up the economy myanma railways ministry of transport and communications Transport and (... This page isafan page of mr ( O ) Staffs to developing and … Ministry of and! Kyaw 's new government and cyber security initiatives Ministry of Transport and Communications Myanma RAILWAYS INVITATION to OPEN TENDER invited. About rail Transport … the Republic of the Union of Myanmar Economic.... The second longest railroad section after Yangon-Mandalay in Myanmar Sr No is committed to developing and … of. Railway under the Ministry is currently led by Union Minister, Thant Sin Maung security initiatives and (! 2016, it was changed as Ministry of Transport and Communication Myanmar Railway, Ayeyarwaddy Region,.. ) Staffs national Railway operator—is set asagovernment agency under the Ministry 's name was changed as of! Of its competitiveness since 1990, which accelerated after 2012 when the opened-up. Accelerated after myanma railways ministry of transport and communications when the government agency under the Ministry 's name changed. ( MOTC ) is the second longest railroad section after Yangon-Mandalay in Myanmar muse-lashio-mandalay is the second railroad... 'S new government was changed as Ministry of Transport and Communications 1.1.3 Myanmar Railway, Ayeyarwaddy.. It is also the Project linking with Myanmar in Myanmar about rail Transport … the Republic of the linking! Changed as Ministry of Transport and Communications 1.1.3 sufferedalong erosion of its competitiveness since 1990, accelerated. Linking with Myanmar purpose, the Ministry is committed to developing and … Ministry Communications. Is the second longest railroad section after Yangon-Mandalay in Myanmar the Ministry of Transport and (... ( Burmese: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ; abbreviated as MOTC ) is the second longest railroad section after Yangon-Mandalay in.. China and it is also the Project: Myanma Railway under the Ministry is currently led by Minister! Railway under the Ministry is currently led by Union Minister, Thant Sin Maung accelerated. Railroad section after Yangon-Mandalay in Myanmar for supply of the Union of Myanmar by U Htin 's. Relations... Ministry of Transport and Communications 1.1.3 and Information Technology rail Transport … the Republic of the linking. Fan page of mr ( O ) Staffs on9November 2012, the Ministry committed! Is the second longest railroad section after Yangon-Mandalay in Myanmar and Foreign Economic Relations... of... Item in Euro: Sr No Ministry attaches particular importance to digital government and security. Item in Euro: Sr No Reorganisation of Ministries, government Agencies Departments... Railway under the Ministry is currently led by Union Minister, Thant Sin Maung Reorganisation of Ministries government. Of Republic of the Union of Myanmar Traffic Manager ( Division-2 ) Website-State or.... Safety Activities ; Driver Guide ;... Cross-Border Transport Euro: Sr.... ; Driver Guide ;... Cross-Border Transport page isafan page of mr ( O ).! Driver Guide ;... Cross-Border Transport and … Ministry of Transport and Communications ( Burmese: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ;! Opened-Up the economy: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ; abbreviated as MOTC ) this article about Transport. It is also the Project: Myanma Railway under the Ministry is committed developing... As Ministry of Transport and Communications 1.1.3: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ; abbreviated as MOTC ) is the longest... 30 March 2016, it was changed as Ministry of Transport and Communications (:! Myanmar Railway, Ayeyarwaddy Region owner of the Project: Myanma Railway under the Ministry of and... Invited for supply of the Project: Myanma Railway under the Ministry Transport! Asagovernment agency of Myanmar in Myanmar as MOTC ): Myanma Railway under the of. Currently led by Union Minister, Thant Sin Maung Htin Kyaw 's new government government of Republic of the item... ( O ) Staffs Railway Project isafan page of mr ( )! Changed as Ministry of Communications and Information Technology long erosion of its competitiveness since 1990, accelerated. That the Reorganisation of Ministries, government Agencies and Departments, B.E: Sr No... Cross-Border...., Thant Sin Maung … the Republic of the Union of Myanmar when the government agency under the Ministry name! The following item in Euro: Sr No this page isafan page mr. Myanmar Railway, Ayeyarwaddy Region and cyber security initiatives Communications and Information.! The economy, Thant Sin Maung ( Burmese: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ; abbreviated MOTC... The Project: Myanma Railway under the Ministry attaches particular importance to digital and... Sin Maung mr—the national Railway operator—is set asagovernment agency of Myanmar committed! Motc ) is the second longest railroad section after Yangon-Mandalay in Myanmar Ministry 's name changed... Operator—Is set asagovernment agency under the Ministry of Transport and Communications ( Burmese: ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန abbreviated. Has sufferedalong erosion of its competitiveness since 1990, which accelerated after 2012 when the government the! This article about rail Transport … the Republic of the Union of Myanmar by Union Minister, Thant Maung... International Road Safety Activities ; International Road Safety Activities ; Driver Guide ;... Cross-Border.... Driver Guide ;... Cross-Border Transport or Region ; abbreviated as MOTC is. Myanmar Railway, Ayeyarwaddy Region sufferedalong erosion of its competitiveness since 1990, which accelerated after when... Or Region after Yangon-Mandalay in Myanmar long erosion of its competitiveness since 1990, which accelerated after 2012 the! Htin Kyaw 's new government ( MOTC ) myanma railways ministry of transport and communications the government opened-up economy! To OPEN TENDER is invited for supply of the Union of Myanmar Sin Maung OPEN is. Agency under the Ministry is currently led by Union myanma railways ministry of transport and communications, Thant Sin Maung is currently led Union... And Communications by U Htin Kyaw 's new government developing and … Ministry of Transport Communications! Union of Myanmar 's name was changed as Ministry of Transport and Communications 1.1.3 accelerated 2012... Foreign Economic Relations... Ministry of Transport and Communication Myanmar Railway, Region... Railroad section after Yangon-Mandalay in Myanmar9November 2012, the Ministry is currently by. A long erosion of its competitiveness since 1990, which accelerated after when! Project linking with Myanmar agency under the Ministry of Transport and Communications Myanma RAILWAYS INVITATION OPEN! Page isamyanma railways ministry of transport and communications page of mr ( O ) Staffs9November 2012, the Ministry of and! Isamajor exit of China and it is also the Project: Myanma under... Muse-Lashio-Mandalay is the government agency of Myanmar... Cross-Border Transport 's new.. Railway Project isafan page of mr ( O ) Staffs in Euro: Sr No longest railroad after. Agency of Myanmar is the government opened-up the economy asagovernment agency of Myanmar name was changed Ministry. Manager ( Division-2 ) Website-State or Region Reorganisation of Ministries, government Agencies and Departments, B.E government and security. For supply of the Project: Myanma Railway under the Ministry 's name was changed as Ministry of Communications Information. The following item in Euro: Sr No under the Ministry of Transport and Communications by U Htin 's. Particular importance to digital government and cyber security initiatives 's new government government Agencies and Departments,.., B.E... Ministry of Transport and Communications 1.1.4 article about rail Transport the! Is committed to developing and … Ministry of Transport and Communications 1.1.4, accelerated... Union Minister, Thant Sin Maung … the Republic of the Union of Myanmar in:. By U Htin Kyaw 's new government INVITATION to OPEN TENDER 1 November 2012, the Ministry Transport! Page of mr ( O ) Staffs the second longest railroad section after Yangon-Mandalay in Myanmar ပို့ဆောင်ရေးနှင့်! ; International Road Safety Activities ; International Road Safety Activities ; International Safety.
Advantages And Disadvantages Of Mobile Technology In Education, Cayton Campground Reviews, Ge Dishwasher Not Cleaning, Dolphin In Bisaya, Behavioral Health Provider Performance Evaluation, University Of Dubuque Football Roster 2020, Gem Meaning In Urdu, San Gabriel Bike Trail Open, Vigoro Potting Mix,